WARARKA BARAAWEPOST sabti 21june 2008
Doorka ama kaalinta laga rabay Cumar Faqi in uu ka qaato Shirka dib u heshisiinta Soomaaliyeed, wuxuu ahaa in uu ku mintido, soona dhiciyo xuquuqda Beesha Tunni, isla markaana qaybtii libaaxa ahayd ee soo jireenka ahayd oo aynu ku lahayn taariikh ahaan & dhaqan ahaanba Qowmiyadda Aw Digil dhexdooda uu dib ugu soo celiyo Beesha Tunni.
Ilaah amarkiis, waxaa dhacday la yaabna noqotay in dhammaan Beelaha ay ka koobnayd Bulshada Soomaaliyeeday xubno ayaga matila ka yeesheen Golaha Shacbiga KMG ee Soomaaliya aan ka ahayn Beesha Tunni oo har cad xaqoodii la qaatay iyadoo Cumar Faqi iyo Odayaasha Dhaqanka Ummadda Soomaaliyeed oo dhami shirkii fadhiyaan, hortooda ayaana xubnihii Golaha Shacbiga lagu qaybsaday, hase yeeshee, qaybtii Tunnida waxaa lagu qoray dad aan Tunni u dhalanin (Saciid Mariino & Maxamed Cabdulqaadir), iyagoo mid kasta hortiisa lagu muujiyay inuu ka tirsan yahay Beesha Tunni, taas oo caddaaladda ka fog isla markaana ka soo horjeeday Axdiga Qaranka.
Markii dulmigii, cadaalad-darradii iyo eexashadii lagula kacay Beesha Tunni loo dacwooday xukuumada Reer Jabuuti, baaritaan lagu sammeeyay arrinta iyada ah, waxaa soo shac baxay, gacantana lagu dhigay warqad uu Cumar Faqi u qoray Dr. Xasan Shaati Gaduud oo markaas ahaa Guddoomiyaha Ururka RRA oo uu kula taliyey (Recommend) in labadii xubnood ee Beesha Tunni xaq u heshay uu ku qoro Saciid Mariino iyo Maxamed Cabdulqaadir Cumurow.
Soomaalidu waxay tiraahda:”Geel ninkii dhicin lahaa, hadduu dhaco (boobo) yaa ka dhicinaya?” Haddaba, haddii ninkii xuquuqda Beesha Tunni sharafteeda iyo karaamadeedaba difaaci lahaa, isla markaana u doodi lahaa uu isagu raalli ka noqday in dadkiisa la dulmo, amaba uu u horseedo jalaafadii loo dhigay beeshiisa, yaa loo raacanaaya?, maxaa yeelay, Cumar Faqi isaga ayaa matilaayay Tolka, taladiisu iyo saxiixiisu ayay marxaladaasi qiimo ku lahaayeen.
Xilligii natiijada baaritaanka soo ifbaxday, Cumar Faqi wuu ka maqnaa Jabuuti, dhowr maalmood ka hor ayuu Xamar galay, isagoo mar-marsiiyo ka dhigtay in jawiga Jabuuti uusan u roonayn, xanuunna uu ku riday, laakinse taasi oo dhan been ayay ahayd ee wuxuu ka dhuuntay falkii foosha xun lahaa ee uu ku kacay, Beeshiisana meel cidla ah ayuu ku riday.
Nin Oday ah oo ku sugan Waddanka USA oo iga codsaday in aan magaciisu sheegin, wuxuu ii caddeeyay in markii uu ogaaday dulmigii iyo cadaalad-darradii lagu sameeyay Beesha Tunni, ayuu Telefoon u diray Eng.Munye Said Cumar oo lagu tuhmaayay in uu arrintaas isagu ka dambeeyay, markii uu weydiyay sababta uu Walaalkiisu Saciid Mariino iyo Maxamed Cabdulqaadir ay Golaha Shacbiga ku galaan magaca Beesha Tunni, wuxuu ugu jawaabay sida soo socota:
”Lacagteyda ayaa shaqeysay iyo ninkii aad shirka u soo dirteen ee matilaayay Tunnida (Cumar Faqi) uu sidaas raalli ugu noqday, warqadna uu saxiixay in labadii xubnood ee Tunnidu xaq u heshay lagu kala qoro Saciid Mariino & Maxamed Cabdulqaadir oo weliba uu warqadiisa ku muujiyay mid kasta hortiisa in uu ka tirsan Beesha Tunn.”
Dulmiga iyo xaq darrada aan geedna loogu gabanin ee lagula kacay Beesha Tunni uma baahan in aan faallo dheer ka bixiyo, sababtoo ah, falkaa ay foolxumadeedu u muuqatay qof kasta oo damiir leh, waxaa door weyn ka ciyaaray marxuuma Cumar Faqi, waxaana taas daliil cad u ah in uusan xitaa weydinin Odayaasha Digil & Mirifle, sababta loo qadiyay Beesha Tunni.
Sidoo kale markii Cumar Faqi Xamar tegay, waxaa Odayaasha Dhaqanka ee Beesha Tunni ka codsadeen in uu dacwad u gudbiyo Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha Golaha Shacbiga, si beesha Tunni loogu soo celiyo xubnihii laga boobay, nasiib darrose, dheg uma dhigin codsiga Odayaasha, balse wuxuu raalli ka noqday in Saciid Mariino iyo Maxamed Cabdulqaadir ay matilaan beel aysan u dhalanin, sidaasna Beesha Tunni ay noqotay Beesha keliya aysan xubin ku yeelanin Golaha Shacbiga KMG ee Carta (Jabuuti) lagu soo dhisay.
Inkastoo Nabigeena Suuban (SCW) yiri: ”Ruux Muslinka ah laba jeer god lagama wada qaniini karo”, Soomaalidana tiraahda: ”I dage Allaha dago, mar labaad i dagase anigaa dagan”, haddana QADAHA & QADDARKA EEBBE awgood, waxaa dhacday in Cumar Faqi uu mar labaad godob ka galay Tunnida, kadib markii kursi ka mid ah kuraasihii Tunnida qayb ahaa u heshay, oggolaaday in la siiyo Eng. Munye Said Cumar, arrintaas waxay u dhacday sida soo socoto:
Intii uu socday Shirkii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ee lagu qabtay Dalka Kenya, Beesha Tunnida ah waxaa matilaayay Dr. Cali Apollo iyo Jeylaani Maxamed Oofu, ayaga ayaa la shiri jiray Odayaasha Dhaqamaha ee ka soo jeeda D/M. ee Shirka ka qayb galay, go’aan wadajir ahna uga gaari jireen arrimaha Qowmiyadda D/M, hadafkooda siyaasadeedna waa ka midaysnaayeen.
Shirkaas wuxuu socday muddo labo sano, Cumar Faqi marna ma Haweysan in uu ka qayb galo shirka, wuxuuna oran jiray mar haddii aan la igu casumin sida Odayaasha Dhaqanka qaarkood casumaad loo soo diray, ma tegaayo sharaftayda iyo sumcadeeda ayaan ilaalinaya, hadii janno lagu gaaraayo & haddii naarta lagu galaayoba, dan kuma lihi;
Markii shirka la soo geba-gabeeyay oo loo gudbay marxaladda labaad ee ahayd qaybinta iyo xulashada xubnaha Barlamaanka FKMG ee Soomaaliyeed oo matili lahaa Beelaha ay ka kooban tahay Ummadda Soomaaliyeed, ayaa waxaa dhacday in Eng. Munye iyo kuwa asaga dabadhilifka u ahaa, ay Baraawe ka soo kaxeeyeen Cumar Faqi isagoo weliba aad u hanuunsanaa geeyeen Nayroba, kadibna u geeyeen Xasan Shaati Gaduud iyo Sheekh Aadan Madoobe, oo ay ka dhaadhiciyeen in uu yahay Suldaanka Tunni Shangamaas, asaga ayayna ka go’daa wax kasta ee saameysa arrimaha Tunnida ah,
Eng. Munye oo lagu yaqaano in uusan ahayn nin la gabada amaba la xishooda in uu wax kasta ka hormariyo danihiisa gaarka ah, isagoo u maraayo waddo kasta (xalaal ama xaaraan) oo uu aaminsan yahay in uu ku gaaraayo muraadkiisa, ayuu ku guuleystay in uu mar kale Beesha Tunni ka booboo hal kursi, iskuna qoro, iyadoo weliba warqadda aqoonsiga ee Xildhibaannimada lagu muujiyay in uu ka tirsan yahay Beesha Tunni. Dulmigaasna waxaa kaalin weyn ka qaatay Cumar Faqi oo warqaddii magacaabidda Xubnaha Barlamaanka ahayd u soo saxiixay Eng. Munye;
Markii Xildhibaan Marxuum Mukhtaar Xaaji Munye uu u gudbiyay Barlamaanka iyo siyaasiinta, indheergaradka, waxgaradka iyo culimaa’u diinta Beesha Tunni Shangamaas oo si wadajir ah Guddoomiyaha Barlamaanka warqad cabasho ah oo ku saabsan caddala-darradii lagu sameeyay Beesha Tunnida ah oo la xiriirta kursi Eng. Munye lagu qoray, Cumar Faqi “Mass Media” hambalyo iyo taageeroba uga diray Eng. Munye ka mid noqoshada Xildhibaan matilaayo Beesha Tunni.
Waxaa hakad galay in Barlamaanka KMG uu .go’aan ka gaaro Mooshinkii lid ku ahaa Eng. Munye oo si musuq-maasuq ku galay Barlamaanka Beel uusan u dhalanin, hase yeeshee, muddo dheer kadib, wuxuu Eng. Munye ku sifoobay qof aanan fulin dhaartii uu ku dhaartay in uu dantiisu ka hormariyo danta guud ee Ummadda Soomaaliyeed, sidaasna looga xayuubiyay Xildhibaannimada Barlamaanka KMG Soomaaliya, waajib gudasho la’aan, waxaana lagu beddelay Cabdinuur Cabdulqaadir.
12aad 13aad 14aad 15aad 16aad 17aad 18aad